नेपालमा विश्वकप फुटबलको रौनक, जर्सि देखि टेलिभिजन सम्मको ब्यापार फस्टायो - Arthakoartha.com
नेपालमा विश्वकप फुटबलको रौनक, जर्सि देखि टेलिभिजन सम्मको ब्यापार फस्टायो
काठमाडौं, १ असार । विश्वकप फुटबल सुरु भएसँगै नेपालमा पनि फुटबल पे्रमिहरु निकै उत्साहित बनेका छन । बिहिबार देखि सुरु भएको विश्वकपमा आयोजक राष्ट्र रुस र साउदी अरेविया विचको पहिलो खेल भएको थियो । प्रतियोगितामा ११० फिफा राष्ट्रहरुबाट छनौट भएका उत्कृष्ट ३२ टोलीहरु सहभागी छन् । यो रुसको विभिन्न १२ ठाँउमा हुनेछ । सन १९३० जुलाइमा उरुग्वेमा सुुरु भएको खेलको पहिलो उपाधी उरुग्वेले जितेको थियो । र, यो २९ औँ विश्वकप हो । फुटबलको महाकुम्भकै रुपमा लिईने विश्वकप हेर्न फुटबल पे्रमी बालबालिका देखी वृद्धहरुमा पनि यसको रौनक छाएको देखिन्छ । उनिहरु आफुले सर्मथन गर्ने देशको जर्सि लगाएर हिडेको भेटिन्छन् । खास गरि युवा जमातमा विश्वकपको रौनक अझ बढी छ ।
युवाहरुको विश्वकप गन्तव्य
अब फुटबल पे्रमीहरु घरको कोठामा बसेर सानो पर्दामा मात्र टिभि हेर्दैनन् । प्रविधीको विकाससँगै फुटबल हेर्नका लागी नेपाली ठुलाठुला ५ तारे होटेल र रेस्टुरेन्टहरुले विशेष अफर सहित ठुलो स्क्रिनमा खेल हेर्ने व्यवस्था मिलाएका छन । विश्वकप सुरु भएसँगै नेपाली ५ तारे होटेल देखि रेस्टुरेन्टहरुहरु बुकिङ भएका छन् । जस मध्ये पुलचोकमा रहेको जिजि मचानले विश्वकप हेर्न आउने ग्राहकहरुलाई प्ले कार्डमा विनिङ टिमको नाम भराइ जित्ने कस्टमरलाई फुड आइटममा १५ प्रतिशत डिस्काउन्ट, करेक्ट टिम र स्कोर भन्नेलाई ३० प्रतिशत डिस्काउन्ट र करेक्ट स्कोर र कसले कति स्कोर गर्छ भनेर जान्नेलाई लन्च कुपन को व्यवस्था गरिएको छ । ४ जनाको टिममा तथा सानो ग्लाडरले भेज फुड आइटमको रु. ८ सय ३०, ४ जना भन्दा बढि अर्थात ८ जना सम्मको टिम तथा ठुलो ग्लाडरले रु. ११ सय ८५छ भने ना–भेजमा सानो ग्लाडरलाई रु. ११ सय २५ देखी ठुलो ग्लाडरले १८ सय ९५ तिर्नु पर्ने छ ।
खेल हेर्ने ग्राहकहरुका लागी राम्रो साउन्ड क्वालीटिका सार्थ प्रोजेक्टर सिस्टमबाट हेर्ने व्यवस्था साथै ग्राहकको रुचि अनुसाार भेज र नन भेज खानाका परिकारहरुमा विशेष छुट दिइएको जिजि मचानका म्यानेजर रमन श्रेष्ठले बताए । उनले अहिले विश्वकपको के्रज निकै बढेको र विशेष गरी युवा वर्गहरु घरको सानो रुममा बसेर हेर्नु भन्दा साथीभाइहरुसँग ग्रुपमा बसेर हेर्न रुचाएको बताए । उनले ५० जना सम्म विश्वकप हेर्ने ग्राहक आउने अनुमान गरेको बताए ।
यसै गरि ¥याडिसन होटेलले आफ्ना रेगुलर कस्टमरहरुका लागि इन्टी« फ्रि राखेको छ । आफ्ना रेगुलर कस्टमरका लागी विश्वकप हेर्न स्क्रिनिङको व्यवस्था गरिए पनि फुड आइटममा भने कुनै छुट दिएको छैन । विश्वकप फुटबललाई विशेष बनाउन स्वदेशी तथा विदेशी खानाका परिकारका व्यवस्था गरिनुका साथै ग्राहकहरुका लागी फ्रि स्क्रिनिङको व्यवस्था गरिएको होटेलकी अनु पराजुलीले बताए ।
टेलिभिजनको व्यापार पनि फस्टायो
अर्काे तिर ठुलाठुला होटेल तथा रेस्टुरेन्टको विल तिर्नु भन्दा घरमै बसेर परिवारसँग विश्वकप हेर्नको जमात पनि ठुलै छ । विश्वकप सुरु भए सँगै खेल हेर्न नयाँ टेलीभिजन सेट र प्रोजेक्टरहरुको पनि खरिद विक्रिमा वृद्धि आएको छ । विश्वकपकै अवसर पारी सिमीत अवधी भर मात्र लागु हुने गरी एलजी कम्पनिले टेली भिजन सेट हरुमा ३१ प्रतिशत सम्मको छुट दिएको युनिवल्ड किचेन तथा एप्लाइनका सराज चापागाइले बताए । उनले २० देखी ६५ इन्च सम्मका टेलिभिजन सेटहरुमध्ये अहिले बजारमा ४३, ४९ र ५५ इन्चका टेलिभिजन सेटको माग बढेको बताए । उनले अहिले बजारमा सोनि, स्यामसुम, एल्जी कम्पनीका टेलिभिजन सेट रुचाइएको बताए । उनले अहिले दैनिक जसो १० टलिभिजन सेटहरु बिक्रि भइरहेको बताए ।
स्टार इलेक्ट्रोनिक्स मैतिदेविका सुमन लामाले विश्वकप नजिकिएसँगै टेलिभिजन सेट र प्रोजेक्टरहरुको विक्रि वितरण बढेको बताए । उनको पसलमा अहिले १७ हजार देखी ९० हजार सम्मका टेलिभिजन सेटहरु छन । ग्राहकहरु टिभी सँगसँगै कन्ट्रयाक्ट बेसमा प्रोजेक्रहरु पनि लैजाने गरेको बताए । उनले दैनिक १० देखी १२ सम्म टेलिभिजन सेटहरु विक्रि हुने गरेको बताए । उनले भने ‘अन्य समय भन्दा तुलनात्मक रुपमा अहिने टेलिभिजन सेट र प्रोजेक्टरहरुको माग बढेको छ । ’